Dia an-tongotra namaky ny Water Park, ao Zaragoza | Vaovao momba ny dia
Dia an-tongotra namaky ny Water Park, ao Zaragoza
Mariela Carril | | España, Inona no ho hita
Maro amin'ireo fananganana izay natsangana indrindra ho an'ny fampirantiana na foara iraisam-pirenena no maharitra mandrakizay. Izany no tranga Valan-drano izay namboarina ho an'ny Expo Zaragoza 2008.
Tadidinao ve izy? Androany dia nomena anarana hoe zaridaina ilay valan-javaboary Zaridaina rano an'i Bu Buel ary nanjary lalana tsara tarehy natolotry ny tanàna ho an'ny olom-pireneny ary koa ho an'ireo mpitsidika azy. Andao hianatra kely momba izany.
2 Ny valan-javaboary Luis Buñel
Manomboka amin'ny 14 Jona ka hatramin'ny 14 Septambra 2008 fampirantiana iraisam-pirenena no natao tao amin'ity tanàna Espaniola ity. ny leit mandrisika ny rano dia ny fampandrosoana maharitra, noho izany ny toerana misy ny trano fampirantiana ny moron'ny Meandro de Ranillas, fantsona izay raisin'ny ony Ebro rehefa mamaky ny tanàna izy.
Firenena zato mahery kely, ONG an-jatony ary vondrom-piarahamonina mizaka tena maro no nandray anjara tamin'ity fampirantiana ity. Fantatry ny tanàna Espaniola ny fomba handresena amin'ireo tanànan'ny mpifaninana hafa toa an'i Trieste na Tesalonika, any Gresy. Nisy mpitsidika efa ho enina tapitrisa ary ny fampirantiana iraisampirenena natambatra tamin'ny faha-roa taonan'ny Zaragoza Sites (manohitra ny fidiran'i Napoleon) ary ilay zato taonan'ny Exposition Hispano-French an'ny 1908.
Noho izany, ny mpandehandeha an'i Ranillas, araka ny efa nolazainay tetsy ambony, dia fiolahana ny Ebro ary eo amin'ny sisiny ankavanan'ny ACTUR - tanànan'i Rey Fernando. Malalaka izy io Toerana 150 hektara izany dia niasa tamin'ny fomba mahazatra toy ny tanimboly sy ala ary manan-danja ho an'ny fiainana biby itoerany.
Mifanaraka amin'ilay fampirantiana, tetezana telo no natsangana nampifandray ny andaniny roa amin'ny renirano, ny Palacio de Congresos ary ilay Torre del Agua tsara tarehy izay iray amin'ireo trano manjaka ankehitriny skyline an'ny Zaragoza.
Ny valan-javaboary Luis Buñel
Ilay valan-javaboary mihitsy dia mitana totalin'ny 120 hektara ary raha avy any amin'ny farany ka hatramin'ny farany ianao dia mandeha roa kilometatra. Talohan'ny fampirantiana dia fantatra amin'ny hoe Metropolitan Water Park. Iñaki Alday, Christine Dalnoki ary Margarita Jover no nanamboatra azy.
Afaka mandeha amin'ny bus izy io, ny tsipika Ci1 sy Ci2 dia mijanona eo, ary raha tsy amin'ny fiara kosa dia misy fijanonana maimaimpoana ho an'ny fiara mihoatra ny arivo. Ny zaridaina dia hita 25 minitra fotsiny avy eo amin'ny Plaza del Pilar, mandeha an-tongotra, na folo minitra avy eo amin'ny gara Ave Delicias. Raha tianao ilay tram dia azonao ampiasaina ihany koa fa miala amin'ny fijanonana Adolfo Aznar dia mila mandeha kelikely ianao.
Na dia an'ny tanàna aza ny valan-javaboary fitantanana ampahibemaso - tsy miankina satria misy toerana malalaka omena ho an'ny tsy miankina. Araka izany, misy a lamasinina mpizahatany, un Multiadventure Park, bisikileta sy sambo no nohofana, misy moron-dranomasina manana fasika, trano fisakafoanana sy kafe, teatra ho an'ny ankizy, golf kely, spa spa, gym, kianja filalaovana baolina kitra 5, mahafinaritra Zaridaina botanika, toerana fitsangantsanganana, lalana tokony hatao mihazakazaka ...
Mikasika ity farany dia misy boribory roa mihazakazaka: ny iray amin'ny 5 kilometatra ary ny iray an'ny 10. Marihina sy ekena izy ireo. Ireo zotra roa ireo dia mitambatra asfalta sy loto ary zahana manaraka ny moron'ny renirano Ebro sy ny manodidina ny Expo, ka izay mijery azy ireo dia afaka mijery tsara ny valan-javaboary sy izay atolotray.
Azonao atao ihany koa ny mitsidika ny Aquarium renirano izay misokatra mandavantaona. Any amin'ny faritry ny fampirantiana izany ary 4 Euro ny vidim-pidirana. ny Laser park Hevitra tena tsara koa izy io satria misokatra mandavantaona ary vidin'ny fidirana amin'ny € 6 isaky ny lalao.
ny hafa Ny habaka fivarotana dia tsy misokatra mandritra ny taona:, ohatra, ny Golf Mini ho an'ny ankizy izay misokatra manomboka ny volana martsa ka hatramin'ny oktobra fotsiny. Toy izany koa ireo morontsiraka izay misokatra manomboka amin'ny Mey ka hatramin'ny Septambra na ny teatra ao Arbolé izay misokatra amin'ny vanim-potoana amin'ny tapakila eo anelanelan'ny 6 sy 8 euro.
Raha mandeha miaraka amin'ny ankizy ianao, dia tsara kokoa ny manomboka ny diany tokotanin-tsekoly izay atsimon'ny valan-javaboary amin'ny ankapobeny, eo amin'ny Paseo del Botánico. Izy io dia manodidina ny telo arivo metatra toradroa ary mitazona ny loka Columpio De Oro as ny faritra tsara indrindra ho an'ny ankizy eran'i Espana. Halahelo azy ve ianao?
Ao amin'ity valan-javaboary ity ho an'ny ankizy, ankizy maherin'ny zato eo anelanelan'ny efatra ka hatramin'ny roa ambin'ny folo taona dia afaka milalao miaraka. Misy lalao 20 eo ho eo eo anelanelan'ny sary mihetsika roa mihoatra ny efatra metatra ny haavony, kianja filalaovam-baolina, swing, piramida hihanika, tsofa, hopscotch, sns. Mitandrema, tsy izany irery ny haben'ny ankizy ao amin'ny Water Park, misy ny hafa ary amin'ny fitambarany dia misy fito, eo anelanelan'ny loharano sy ny kianja filalaovana, ka mila misafidy ianao.
Maimaimpoana ary maimaimpoana ny fidirana amin'ny Water Park , tsy misy hidin-trano, varavarana na vavahady, ka misokatra foana. Ny hevitra dia ny fananan'ny fianakavian'i Zaragoza sy mankafy an'io habaka maintso lehibe io. Ny mpitsidika sasany dia mitaraina fa amin'ny fahavaratra dia tsy misy alokaloka firy, fa ny tena marina dia mandritra ny taona maro dia hitombo ny hazo ary ho fanampin'ny rano, ny gana sy biby hafa dia hanana canopy betsaka kokoa ary hanome alokaloka bebe kokoa ny hazo.
Zaragoza dia tanàna iray, tanàna iray ary renivohi-paritra sy faritany manana izany anarana izany ihany, ao anatin'ny Vondrom-pirenen'i Aragon. Io no tanàna fahadimy misy mponina ao amin'ny firenena ary manodidina ny 275 kilometatra miala an'i Madrid, amin'ny tsipika mahitsy, saingy manodidina ny 317 kilometatra amoron-dalana. Raha mandeha fiara ianao dia adiny telo eo ho eo no eo, fa afaka maka ny AVE ianao ary tonga ao anatin'ny adiny iray sy 19 minitra, ny iray haingana, na adiny iray sy 35 minitra amin'ny kinova farany miadana.
Ny AVE dia misy sokajy telo, fizahan-tany, tombony na klioba ary izany no mahatonga ny tahan'ny tsy mitovy. Misy ny tapakila Promo, Tapakila mirindra, Tapakilan'ny fianakaviana ary BonoAVE manan-kery mandritra ny dia folo. Raha tsy te handany amin'ny AVE ianao dia afaka mandray ny lamasinina rezionaly fa efa mampitandrina anao aho fa maharitra adiny efatra sy sasany. Miasa manomboka ny Alatsinainy ka hatramin'ny Alahady ary mampifandray ireo gara Chamartín amin'i Delicias.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Dia an-tongotra namaky ny Water Park, ao Zaragoza
Ahoana ny fomba fiasan'ny politikan'ny fanafoanana ny dia